के हाे टन्सिल ? टन्सिलबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरायसी औषधि - Mitho Khabar
June 26, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on के हाे टन्सिल ? टन्सिलबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरायसी औषधि
टन्सिलका कारण तपाईले धेरै दुख पाउनु भएको होला । मौसममा आउने परिवर्तन पछि रुघा लाग्ने र टन्सिल हुने सामान्य जस्तै भएको हुन्छ । सामान्यता मौसममा आउने परिवर्तनका साथै चिसो तातो खान आदीका कारण टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या पर्छ ।
राम्रोसँग खान र पानी निल्न पनि नसक्ने भएपनि खानपानमा समस्या नपर्ने कुरै भएन। टन्सीलबाट दुख पाएर मानिसहरु मेडिकलबाट विभिन्न खालका औषधि ल्याएर खाने गर्छन् । तर टन्सिलको उपचारका लागि घराउसी विधिले निकै फाइद पुग्छ ।
ओली–प्रचण्ड तीन घण्टा वार्ताः दुवैको आ–आफ्नै शर्त